नेपालमा बज्यो खतरा’को घ’ण्टी ! संक्रमण बढिरहँदा पनि नाकामा यति सम्मको लापरबाही – Sandesh Press
August 7, 2021 163
संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल–भारत सीमाहरूमा कडाइ हुनुपर्ने हो, तर रूपन्देहीका सिमानाकाहरूबाट आवत–जावत निर्वाध छ । नेपाली बजारमा आउने सयौं भारतीयहरूलाई पनि उस्तै छुट छ, कसैलाई रोक छैन । जिल्लामा नाम मात्रको निषेधाज्ञा छ । बेलहिया, मर्चबार, लुम्बिनी, धकधई क्षेत्रका नाकाहरू खुला सरह छन् ।
मुख्य नाका बेलहिया बाहेक अन्य नाकाबाट भारतीय मोटरसाइकलमा समेत आवत–जावत हुने गरेको छ । रूपन्देहीको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाका प्रहरी निरीक्षक नवीन पौडेका अनुसार नेपालीहरूको चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा भारतबाट आउने र सीमावर्ती भारतीय बजारमा उपभोग्य साम्रगी खरिद गर्न जाँदा सीमामा नेपालीको संख्या बढेको हो ।
रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट मात्र भारतबाट दैनिक करिब एक हजार २ सय आउने र नेपालबाट करिब सात सय सर्वसाधारण जाने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सिमानाका नजिकैका स्थानीयवासीले सहयोग नगर्दा आवत–जावत पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ परेको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर २७ गण रूपन्देहीका एसपी राजेश उप्रेती बताउँछन् ।
पूर्वका काँकडभिट्टा र जोगवनी सिमानाका भने सुनसान छन् । आयात निर्यात नरोकिए पनि मानिसको आउजाउ पातलो छ । कोरोना परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्टका आधारमा काँकडभिट्टा नाकाबाट सर्वसाधारणलाई आउजाउ गर्न दिइरहेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिना बताउँछन् ।
प्रदेश राजधानी विराटनगर प्रवेशको जोगवनी नाकामा पनि परीक्षण रिपोर्टका आधारमा आउजाउ गर्न दिइएको छ । स्थानीय प्रशासनको आँखा छलेर मोरङका विभिन्न नाकाबाट लुकीछिपी प्रवेश गर्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ । बिहान आउने र बेलुका उतै फर्किनेहरू पनि छन् । त्यसले पनि संक्रमणको जोखिम बढाएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले खुलेआम तथा लुकिछिपी भइरहेको आवत–जावत नियन्त्रण गर्न नसक्दा प्रदेशमा भारतबाटै कोरोना फैलिएको बताए । ‘बेलैमा नाका ठप्प बनाउन सकिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नाकामा हेलेचेक्राइँ गरिँदा अवस्था निक्कै जटिल बन्यो ।’
सुनसरीको सीमा नाका अघिल्लो लकडाउनदेखि नै बन्द रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिए । नेपाल तथा भारत जोड्ने स–साना नाकाबाट मानिसहरू आवत–जावत गर्ने र नजिकका बजारमा किनमेल गर्ने गरेकोमा अहिले कडाइका साथ बन्द गरिएको प्रजिअ ढकालको भनाइ छ । कोरोना फैलावट तीव्र रहेको भारतबाट भइरहेको खुलेआम आउजाउका कारण प्रदेश १ का सीमावर्ती जिल्लामा संक्रमण सल्किएको आशंका छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट
Prevरातिदेखि बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा भी’षण आ’गलागी, पानी खसाउँदै सिम्रिक एयर
Nextज्योतिषशास्त्रका अनुसार यी ३ महिनामा जन्मनेहरु धेरै भाग्यमानी, सधैँ दिन्छ भाग्यले साथ !
क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्ध होइन, नियमन गर्नुपर्छ; ढिला गरे पछि परिन्छ’